I-LUXMAIN AC uthotho olukhawulezayo kukunyusa okuncinci, ukukhanya, ukwahlula imoto. Iseti yezixhobo zohlulwe zaziimitha ezimbini zokuphakamisa kunye neyunithi yamandla enye, iyonke zizinto ezintathu, ezinokugcinwa zodwa. Isakhelo esinye sokuphakamisa isakhelo, esinokuqhutywa ngokulula ngumntu omnye. Kuxhotyiswe ngevili lokutsala kunye nevili lendawo yonke, ekulungeleyo ukurhuqa kunye nokulungisa indawo yokuphakamisa. Iyunithi yamandla ixhotyiswe ngesixhobo sokuvumelanisa ngesanti kubunzulu baphantsi ukuqinisekisa ukuphakanyiswa kokuhambelana kweefreyimu zokuphakamisa kumacala omabini. Zombini iyunithi yamandla kunye nesilinda yeoyile azinamanzi. Logama nje ikumhlaba oqinisiweyo, ungayiphakamisa imoto yakho ukuze igcinwe nanini na kwaye naphi na.
L-E60 Series New imoto yesithuthi ibhetri lift itroli
LUXMAIN L-E60 uthotho lwamandla esithuthi esitsha sonyusa itroli yamkela i-electro-hydraulic drive izixhobo zokuphakamisa kwaye zixhotyiswe ngeefreyim eziqhekeziweyo. Zisetyenziselwa ukuphakamisa nokuhambisa xa ibhetri yamandla ezithuthi ezitsha zamandla isusiwe kwaye ifakiwe.
Iselfowni ePost Post yokuPhakamisa imoto, Isiphatho seHydraulic Scissor seMoto, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa phantsi komhlaba, Ukuphakanyiswa kweMoto eNye ePhathekayo, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa okungaphakathi, Isilinda esibambeleyo esinye,